Posted By: KongoLisolowaa: Sebtember 26, 2020 00: 50 No Comments
Intii lagu guda jiray dagaalka, Koonfurta Ameerika, basaas lagu tababaray Paris oo Nazis, oo ka soo jeeda Afro, ayaa la xiray. Waxaa sidoo kale jiray dhowr qof oo go'doonsan - mararka qaarna si qayaxan - kiisaska Afro-faracyada ka dagaallamayay LVF (Legion of French Volunteers) ama qaybta Charlemagne oo ku hawlanaa Jabhadda Bariga. Norbert Désirée, tusaale ahaan.
Dhowr shaqsiyaad Hindi Galbeed ah ayaa ku lumay wada shaqeynta: waa Guadeloupean Gratien Candace iyo Martinican Henry Lémery. Candace wuxuu u codeeyay awooda buuxda ee Pétain, Léméry wuxuu ahaa Wasiirka Vichy. Lénis Blanche - oo sidoo kale ahaa Guadeloupe-kii ugu horreeyay ee soo gala école normale supérieure - waxaa lagu eedeeyay inuu aad ugu dhowaa guddoomiyaha Guadeloupe ee uu magacaabay Vichy, Constant Sorin.
Marka laga soo tago kiisaskan aadka u yar, inta badan dadka madow / Afrikaanka iyo Afro-ka soo jeeda ayaa ku midoobay ka soo horjeedka dowladdii seddexaad, waxay si geesinimo leh ula dagaallameen Nazism oo ay ku bixiyeen qiimahaas.
Oct20 12: 40
Waa tan habdhaqanka Ilaah ee Masiixiyiinta: aan si wada jir ah u eegno ficillada Ilaaha Masiixiyiinta iyo Masiixiyiinta naftooda, mid walbana sifiican ayuu u fiirsan karaa; annagu waxba ma hindisano, ka dibna noo sheeg waxa aad u malaynayso
Oktoobar 19, 2020 06: 00
Diimaha ma daroogo? Karl Marx, ka dib markuu si caqli gal ah u bartay bulshooyinka diinta iyo kuwa raacsan, wuxuu u soo baxay "Diintu waa opium dadka"; taas oo soo jeedinaysa in diimuhu yihiin daroogo kuwa soo noqnoqonayana ay iyaguba yihiin kuwa daroogaysan
Oktoobar 19, 2020 04: 00